जीवनका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने शास्त्रीय उपाय | Kendrabindu Nepal Online News
३० भाद्र २०७६, सोमबार १३:१६
कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा पाँच प्रकारका समस्याले सताउन सक्छन् । पहिलो दैहिक वा शारीरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी, दोस्रो मानिसिक वा मनसम्बन्धी, तेस्रो आत्मिक वा आत्मासम्बन्धी, चौथो आर्थिक वा धनसम्बन्धी र पाँचौँ अदृश्य अर्थात् देवीदवता, ग्रहनक्षत्र, वास्तु वा भूतप्रेतसम्बन्धी । यस्ता समस्याहरूलाई कसरी कम गर्न वा रोक्न सकिन्छ र आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउन सकिन्छ त ? शास्त्रीय उपाय यस्ता छन् –
न कोही मर्छ न कसैले मार्छ
गीताले भनेको छ– हरेक संकटहरूसँग जुधेर नै मानिसको आत्मविकास हुन्छ । यदि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईं शरीर होइन । आत्माको वस्त्र हो । आत्माले वस्त्र फेरिरहन्छ, अनि तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि न केही मर्छ न कसैले मार्छ, सबै निमित्त मात्र हुन् । जे भयो र जे भइरहेको छ र जे हुनेछ त्यसमा तपाईंको कुनै दोष छैन, किनभने तपाईं कर्ता होइन । जसले स्वयंलाई कर्ता मान्दछन्, उनीहरू दुःखमा बाँच्दछन् । यसकारण यो सम्झनुहोस् कि तपाईं तल पर्नुभएको छ भने आफ्नै कर्मका कारण अनि माथि उठ्नुभएको छ भने पनि आफ्नै कर्मको कारण । मानिसलाई कर्मको अधिकार छ तर ऊ कर्ता होइन ।
योग र आयुर्वेदसँग नाता
भनिन्छ, यस्तो कुनै रोग छैन जसलाई नाश गर्न नसकियोस् अनि त्यस्तो कुनै शोक छैन जसलाई हटाउन नसकियोस्. । यस्तो चमत्कार आफूमा घटित होस् भन्ने चाहना छ ? छ भने आफ्नो जीवनशैली बदल्नुहोस् अनि जीवनलाई योग र आयुर्वेदको नियमअनुसार चलाउनुहोस् । बिहान उठ्नेबित्तिकै चिया, कफी, खाजा खान छाडेर पहिले कागतीपानी वा ताजा फलफूलको रस पिउनुहोस् अनि शौचादि कर्म गर्नुहोस् । त्यसपछि ६ देखि १० पटक सूर्यनमस्कार आसन गर्नुहोस् । १५–२० मिनेटपछि पानी पिउनुहोस् । मध्याह्नमा आयुर्वेदले निर्देश गरेअनुसार खाना खानुहोस् । खानपान परिवर्तन गरेपछि शरीर परिवर्तन हुन्छ, शरीर परिवर्तन भएपछि मन परिवर्तन हुन्छ, मन परिवर्तन भएपछि भविष्य परिवर्तन हुन्छ ।
हिन्दू धर्ममा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी चार पुरुषार्थ बताइएको छ । शास्त्रले भन्छ, धर्मको ज्ञान भएपछि कार्यका कुशलता आउँछ । कार्यकुशलता भएपछि मानिसले अर्थ आर्जन गर्न सक्छ । अर्थ अर्थात् पैसा कमाउन त्यसले मात्र सक्छ जोसँग कार्यकुशलता छ । पैसा भएपछि कामोपभोग गर्नमा बाधा हुँदैन । अनि मानिसले अर्थ र कामभन्दा माथि उठेर मोक्षका विषयमा सोच्न सक्छ, सोच्नुपर्छ । जोसँग धर्मको ज्ञान छैन ऊ विनम्र, ज्ञानी, समझदार र बुद्धिमान् बन्न सक्दैन । अर्थको अभिप्राय हो, जुनद्वारा भोीतक सुखसमृद्धिको सिद्धि हुन्छ । भोतिक सुखबाट मुक्त हुनका लागि भौतिक सुख हुनु जरुरी छ । त्यसकारण यस्तो कर्म गर्नुपर्छ जुनबाट अर्थ आर्जन होस् । अर्थद्वारा नै हरेक काम सम्पन्न हुन्छन् ।
जीवनमा नियम जरुरी
धेरैजसो मानिस जतिबेला मन लाग्यो उठ्छन् अनि जतिबेला मनलाग्यो सुत्छन् । जतिबेला पनि खान्छन्, जतिबेला जहाँसुकै घुम्न निस्कन्छन् । उनीहरूको जीवनमा समयको उचित प्रबन्धन हुँदैन । उनीहरू अव्यवस्थित जीवन बाँच्दछन् । जसको जीवन व्यवस्थित छैन उनीहरू सुन्दर भविष्यको केवल सपना देख्छन् । यसकारण जीवनमा उठ्ने, पूजापाठ गर्ने, खानपान गर्ने, सुत्ने र उठ्ने तथा लक्ष्यलाई पूरा गर्नेजस्ता विविध कुराहरूको नियम बनाउनु पर्छ । समयलाई विनासित्ति गुमाउनु हुँदैन किनभने जीवन निकै छोटो छ ।
अदृश्य संसार दृश्य संसारको आधार
हिन्दू धर्मअनुसार दृश्य संसारको आधार अदृश्य संसार हो । अदृश्य संसारलाई नमान्नु सजिलो छ किनभने त्यसलाई बुझ्न अति नै कठिन छ । यद्यपि यथार्थ के हो भने मानव जीवनमा प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ग्रह नक्षत्र, देवीदेवता एवं प्रेत आदि अदृश्य गतिविधिको पनि प्रभाव पर्छ । यसलाई हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि घर वास्तुशास्त्रले निर्देश गरेअनुरूप हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो एक ईष्टदेव बनाउनुपर्छ र जीवनभर दुःखका बेलामा समेत उसैको भक्ति गरिरहनुपर्छ । किनभने भक्तिमा आश्चर्यजनक शक्ति छ ।
Law, problem, soul, अदृश्य संसार, आत्मा, कार्यकुशलता
Prevप्रहरीको सुरक्षामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाही रिहा
भतिजसँग रातभर मस्ती, गाउँलेले देखेपछि दुवैकाे रामधुलाइNext
आधुनिक देशमा महिला बिरुद्ध रहेको कठोर कानून
फोहोर उठ्न नसक्दा उर्लाबारी नगर दुर्गन्धित
नमूना कानूनको भरमा स्थानीय तह संचालन हुने